Iimodeli zeTV kwimarike yemasheya ephantsi koviwo: I-Mediaset kunye ne-Atresmedia | Ezezimali
Iimodeli zeTV kwimarike yemasheya ephantsi koviwo: I-Mediaset kunye ne-Atresmedia
La ngawona maxesha alungileyo eendaba ezimanyelwayo nezibhalwe kuLingano lweSpain. Babhaptiziwe kwi- Ijelo le-bearish yobunzulu obukhulu kwaye kufanele ukuba ibase nakwezona zikhundla ziphantsi kwikoteyishini yamaxabiso abo. Okwangoku zimbini iinkampani ezimele eli candelo libalulekileyo: iMedaset kunye neAtresmedia. Ngendaleko ebonakala ngathi ilandelwe omnye komnye. Umahluko kuphela kukuba owokuqala kubo udwelisiwe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zeSpain, ngelixa i-Atresmedia idityaniswe kwimarike yesizwe eqhubekayo. Kodwa ngolindelo olufanayo.
Kuzo zombini iimeko, kuye kwakho ukwehla okukhulu kumaxabiso abo kwiiseshoni zorhwebo zamva nje. Kwelinye icala, asinakulibala ukuba bezizezona zibalulekileyo kwezona zitokhwe zichaphazelekayo kwimarike yaseSpain kunyaka ophelileyo, kwi2018. Le nto ibangele ukuba iBhodi yeMlawuli yeMediaset ithathe isigqibo kwintlanganiso yayo yokwenza isabelo sayo. Inkqubo yokubuyisa, ethe yathunyelwa kwiKhomishini kaZwelonke yoThengiso lwezoThengiso (CNMV). Oku kubangela ukuba ibaluleke 5% iyabhabha, nokuba ifike ngexesha.
Kodwa ukuba omabini amaxabiso abonakaliswa ngento ethile, kungenxa yokuba icandelo labo lobuchwephesha ayimemi ukuba bangene kwizikhundla zabo, ubuncinci kwixesha elifutshane. Ayothusi into yokuba umngcipheko uphezulu kakhulu kuba amaxabiso asenokuhla ngakumbi. Apho izikhundla ezimfutshane zibekwa ngekristale ecacileyo kubathengi. Nangona kuya kufuneka silinde zombini ezi nkampani zidwelisiweyo ukuba zenze umgangatho apho zinokuphinda zibuyele khona kwizikhundla zazo. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni kufuneka unike ingqwalaselo kwindaleko kwiintsuku ezizayo.
1 Bahambisa izabelo ngaphezulu kwe-10%
2 I-Mediaset ibuzwa kwimarike yemasheya
3 I-Mediaset kwindlela enqamlezileyo
4 I-Atresmedia ifumana i-69 yezigidi
5 Icandelo elinokuguquguquka kakhulu
6 Sika kwingeniso yentengiso
Bahambisa izabelo ngaphezulu kwe-10%
Ngayiphi na imeko, kukho umbandela osebenzayo uxhasa la maxabiso mabini alinganayo eSpain. Akukho enye ngaphandle kwesahlulelo esiphezulu abasibonelela kubanini zabelo minyaka le. Akukho nto ingaphantsi kwe-11%, njenge iinkokeli koku kubuyela kubatyali mali. Ixabiso elingenakuthathelwa ingqalelo ukwenza ibhegi yolondolozo oluzinzileyo unyaka nonyaka. Ayikho enye inkampani ebonelela ngenzuzo efanayo kuba eyona isondeleyo yinkampani yombane i-Endesa enomdla kwinqanaba le-7%. Ngokomgaqo, kubonakala ngathi sisizathu esivulekileyo sokuvula izikhundla, zombini kwi-Mediaset nakwi-Atresmedia.
Ukuqaqambisa ukubaluleka kwezi ntlawulo, akukho nto ingcono kunokuyibonisa ngomzekelo osebenzayo. Utyalo-mali olwenzileyo otyalo-mali lwe-10.000 euros kwenye yezi nkampani zimbini, uya kuba eqokelele inzuzo ejikeleze i-1.100 ye-euros minyaka le. Ngamanye amagama, kwisithuba nje esingaphezulu kweminyaka esibhozo iya kuba iyiphelisile intsebenzo. Nokuba kwenzeka ntoni kwiimarike zezabelo. Le nyaniso, ithiyori, kufuneka ikhuthaze abatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba bathathe izikhundla kwiMediaset naseAresmedia. Kodwa kuyinyani ukuba le ayisiyonyani.
I-Mediaset ibuzwa kwimarike yemasheya
Kukho amathandabuzo amaninzi ukuba icandelo likamabonwakude ligcina ngalo mzuzu kanye. Ngokukodwa, ngokubhekisele kwifayile ye- Ingeniso yentengiso kuba ingowona mthombo wengeniso okwangoku. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ngenxa yokuba ukhuphiswano kumajelo eendaba kwi-Intanethi okanye ezinye iinkqubo zetekhnoloji zomelele kakhulu. Ngamanye amagama, ingeniso yentengiso iyasasazwa kumajelo eendaba nangakumbi. Kwaye le nto ayizithandi iimarike zezemali.
Kwelinye icala, intengiso ngumsebenzi onxulumene ngokusondeleyo nemijikelezo yezoqoqosho kwaye kule ndlela ulindelo aluthandeki kakhulu. Inkqubo ye- ukwehla kwezoqoqosho Amazwe aphesheya yinyani kwaye uhlaziyo olusezantsi luhlala luhleli kwiingxelo ezilungiselelwe yimibutho eyahlukeneyo yamanye amazwe. Oku kohlwaya ixabiso leMediaset kunye neAresmedia yiyo loo nto bebonisa amaxabiso angalungeleliswanga kunakwiminyaka embalwa edlulileyo. Ngale ndlela, bakhuselekile abanokuthi baqhubeke nokulungiswa kwamaxabiso abalulekileyo.
I-Mediaset kwindlela enqamlezileyo
Kwiiseshoni zorhwebo zamva nje, ukhuseleko lwe I-Mediaset España Bajongise phezulu nasezantsi. Ukuya kwinqanaba lokuba akukho mathandabuzo okuba balahlekisa indawo enkulu yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwinqanaba apho bengazi ukuba bobuphi ubuchule bokusebenzisa kutyalo-mali lwabo. Nangona kunjalo, ngaphakathi kwesiteshi se-bearish esingacacanga apho ixabiso lihamba khona ukusukela phakathi kunyaka ophelileyo. Apho kukho uthotho lwezihlabo ezinamaxesha athile alahlekisa abatyali mali.
Ukusuka kule meko ngokubanzi, une ukumelana kumanqanaba asondele kakhulu kwii-euro ezi-6,5 isabelo ngasinye. Kwelinye icala, ukuba kugqityiwe, kunokuvulwa izikhundla ukwenza ulondolozo lube nenzuzo ngexesha elingelide kakhulu. Nangona kunjalo eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba kukho utshintsho kwindlela, into engekenzeki ukuza kuthi ga ngoku. Hayi kangako. Kodwa ubuncinci kufanelekile ukubeka ukhuseleko lwale nkampani kwi-radar ukuqala iintshukumo kwiimarike ze-equity.
I-Atresmedia ifumana i-69 yezigidi
Ngokubhekisele kwenye inkampani ekweli candelo, iAtresmedia, iziphumo zayo zeshishini aziboneleli imikhondo malunga nesicwangciso ekufuneka sithatyathwe ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi ukusukela ngoku. Kuba, enyanisweni, ikhonkco lonxibelelwano lifumene kwisiqingatha sokuqala sonyaka a Ebitda yezigidi eziyi-101,3 zeerandi kwaye inzuzo yayo epheleleyo ifikelele kwizigidi ezingama-69,3 zeerandi. Kwintengiso yentengiso ehleli emgceni (+ 0,5%) ngeli xesha linye lika-2017, ngokweengqikelelo zangaphandle, inkampani edwelisiweyo ikwazile ukugcina ingeniso iyonke ukufikelela kwi-550,6 yezigidi zeerandi.
Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba i-Atresmedia yenze ngempumelelo ulawulo lweendleko kwaye ngenxa yoko iindleko zokuSebenza zikhule kuphela nge-0,5%. Apho kubonakala khona ukuba isaphulelo ukufunyanwa kwentengiso yedijithali ye-SmartClip. Kwelinye icala, ingeniso yomzi mveliso yeshishini lokumamela nokumamela ikwi-513,8 yezigidi ze-euro kwaye yahlulwa ngolu hlobo lulandelayo: 443,4 yezigidi ezifunyenwe Intengiso kumabonakude. Ngale datha, isabelo se-Atresmedia Televisión sentengiso simi kwi-41,6%. Idatha engakhange ichaphazele kakhulu ukuhambelana kwamaxabiso abo kwiimarike zezabelo.
Icandelo elinokuguquguquka kakhulu
Eyona nto ifanayo kwicandelo liphela, kwaye ke kwezi nkampani zimbini, kukungazinzi okuphezulu. Apho ngolunye usuku inokunyuka kakhulu kwaye ngosuku olulandelayo iisenti ezininzi ze-euro zingashiywa endleleni. Kucetyiswa kakhulu ukuba uyenze imisebenzi yorhwebo, ukwenza ukonga kunenzuzo ngexesha elifutshane kakhulu. Apho abatyali mali banoburhalarhume ngabo ikakhulu bavule izikhundla kolu khuseleko. Ukonzakalisa abona bantu bazikhuselayo abo bebodwa abajonga kwizabelo eziphezulu ezisasazwe zezi zihloko zidityaniswe kwimarike yaseSpain.
Kwelinye icala, ingeniso yecandelo lemali ifikelela kwi-42,2 yezigidi zeerandi, ngokuhambelana nezo zafunyanwa kwangelo xesha linye lika-2017. Ingeniso epheleleyo yeshishini lonomathotholo eliqokelelwe ukusukela nge-Juni 2018 ye-9,1 yezigidi zeerandi, ezimele Umda kwingeniso epheleleyo ye-21,5%. Kwimeko apho kuya kufuneka ukubonisa ukuba iyakuba yintoni na imeko yokhuseleko lwabo kwiimarike ze-equity ukusukela kula maxesha ngqo. Nangona kuya kuxhomekeka kwinqanaba elithile kwindaleko yee-indices zesitokhwe sentengiso yaseSpain. Akumangalisi ukuba ezi ntlobo zeenkampani zininzi kakhulu inxulunyaniswa nemijikelo yezoqoqosho Ngale ndlela, ngoku ayiloxesha elifanelekileyo lokuvula izikhundla.
Sika kwingeniso yentengiso
Ngokumalunga nabaphulaphuli, kuyinyani yokuba baphulukana nomphunga ngenxa ye- ukwanda kumabonwakude kwaye ke lo mbandela uchaphazela ukwazisa okwenziwa kwezi ndlela zonxibelelwano. Kungaphezulu kwesizathu esaneleyo sokuba ezi nkampani zimbini ziqhubeke nokwehla kwiiseshoni zokurhweba ezilandelayo, ngaphaya kwento enokwenzeka ngezinye iintlobo zokuqwalaselwa kobuchwephesha. Apho kukho uthotho lwezihlabo ezinamaxesha athile alahlekisa abatyali mali.
Zizo ke ezo zinto zichaphazela ukwenziwa kwamaxabiso, ngengqondo enye okanye enye. Okwangoku, yonke into ibonakala ngathi iya kuqhubeka ukwehla, nangona kungaziwa kude kube ngawuphi na umzuzu. Esi iya kuba sesinye sezitshixo sokwenza naluphi na uhlobo lwesicwangciso ngezi zinto zimbini zokuxabiseka kwesizwe. Okwangoku, abanako ukwamkelwa kwezindululo ngabameli bezezimali abohlukeneyo. Apho kukho uthotho lwezihlabo ezinamaxesha athile alahlekisa abatyali mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iimodeli zeTV kwimarike yemasheya ephantsi koviwo: I-Mediaset kunye ne-Atresmedia
Umrhwebi oza kusebenza kwimarike ye-forex
Ukudityaniswa okunokwenzeka kweMediaset kunye nomzali wayo